Global Voices teny Malagasy » Voatsikera tamin’ny famariparitana ratsy ny renivohitr’i Bangladesh ny ‘Extraction’ navoakan’ny Netflix · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Mey 2020 16:44 GMT 1	 · Mpanoratra বিজয় Nandika (en) i Rezwan, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Saripika, Tantara, Teknolojia, Tontolo_iainana, Tsidika, Vaovao Tsara
Pikantsary avy amin'ny ampahan'ny sarimihetsika Extraction nivoaka ôrizinaly tao amin'ny Netflix mampiseho tetezana iray ao Dhaka, Bangladesh.
NIvoaka voalohany tamin'ny 24 avrily, ary vetivety dia lasa be mpijery indrindra nahazo mpijery 90 tapitrisa  tao anatin'ny herinandro efatra voalohany nivoahany, ny donadona mampitaintaina amerikana sady ôrizinaly Netflix mitondra ny lohateny hoe “Extraction ” (nitondra ny lohateny hoe Dhaka teo aloha). Nahaliana  ny mpijery maro avy ao Bangladesh ny sarimihetsika satria mizotra  ao amin'ny renivohiny, Dhaka , ny tantara. Na izany aza, tsy ela taorian'ny nanombohany nandeha mivantana an-tserasera dia efa nahazo tsikera sy adihevitra  ilay izy noho izy tsy mifanaraka amin'ny zavamisy sy ny hevi-draikitra amariparitana an'i Bangladesh sy ny Bangladeshita.
Ny fomba nanehoana an'i Dhaka tao amin'ny Extraction, sarimihetsika Netflix ôrizinaly, feno fahadalàna. Ataon-dry zareo ho feno tranom-barìka i Dhaka izay mamariparitra ny milanjalanja orona amintsika. Maharikoriko ny fomba hanehoan-dry zareo ny toerana ratsy indrindra eto ambonin'ny tany ho i Dhaka. Maharikoriko!
Fa inona no tsy nety
Chris Hemsworth , kintan'ny Extraction, nalaza tao amin'ny Avengers sady filma voalohany notontosain'ilay mpandrindra malaza ao Hollywood amin'ireo fihetsika mampitolagaga Sam Hargrave . Nandray asan'ny mpikarama an'ady hanavotana ny zanaky ny lehiben'ny mpivaro-drongony Indiana iray izay nalain'ny lehiben'ny mpivaro-drongony Bangladeshita iray an-keriny ary naondrana any amin'ny toerana tsy fantatra ao Dhaka ireo mpandray anjara amin'ilay filma, Tyler Rake (Chris Hemsworth) sy Nik Khan (Golshifteh Farahani). Ity sarimihetsika ity dia nifototra tamin'ny tantara mampihoron-koditra mitondra ny lohateny hoe Ciudad , nosoratan'i Ande Parks izay tena nitranga tokoa amin'ny fiainana tena izy tao amin'ny tanànan'i Paraguay manana ny anarana hoe Ciudad del Este. Nataon'i  Joe sy Anthony Russo ho azo jerena amin'ny efijery izy io, fa nataon-dry zareo ho tantara mitranga any amin'ny tanàndehibe aziatika atsimo kosa indray.
Na dia natao hoe nitranga tany Bangladesh aza ny ankamaroan'ny sehatra, dia tany amin'ireo tanàna Indiana no nakana ny ankamaroan'ny sary, tao Ahmedabad sy Mumbai , ary nisy natao tao Ban Pong, Thailandy  ihany koa. Na izany aza, misy sary tena misy ao Dhaka nampiasaina tao amin'ny filma, araka ny izaràn'i  Hargrave azy ao amin'ny kaontiny Instagram .
Dhaka ao amin'ny “Extraction” sy Dhaka amin'ny fiainana andavanandro
Mitaraina  amin'ny tsy fahampian'ny fikarohana amin'ny kolontsaina ao an-toerana sy ilay sivana mavomavo nampiasaina hanoritsoritana an'i Dhaka ho toerana mangirifiry sy tsy fahita firy  ny Bangladeshita mpitsikera filma. Notsikerain-dry zareo ihany koa ny namariparitana an'i Bangladesh ho anjakan'ny tsy ara-dalàna araka ny avoitran'ny tantara mampiditra lehiben-drongony  iray mibaiko mpampihatra lalàna ambony iray handefa ny tafiny hifanandrina amin'ilay olona lalaovin'i Hemsworth.
Aminul Islam Emon, mpahay maritrano iray monina ao Dhaka, nilaza ny heviny momba ilay sarimihetsika  rehefa avy nijery izany:
Be loatra ny herisetra. Tsy nisy ny tantara nahavalalanina. Ny fihetsiketsehana sy ny donadona no niezahana hanaronana izany.
Nahaliana ahy ny nijery ny sarimihetsika hoa manao ahoana izany ny tanànan'i Dhaka eo imason'ireo vahiny. Tsy ho tia ny hijery ity sarimihetsika ity ny ankamaroan'ny Bangladeshita. Satria tamin'ny fomba ratsy dia ratsy no namariparitana an'i Dhaka.
Mpiasan'ny sady mpiondana filma, nandefa ny jery tamberiny taty amin'ny Global Voices i Muqit AL Rahman , nanasongadina fa tsy izy ny toerana nanaovana ny sehatra:
Tsy isalasalana fa nampirintona izay rehetra Bangladeshita ny fomba nanoritsoritana an'i Dhaka. Misy ireo antsipirihan-javatra izay indraindray mankaleo ary indraindray mampihomehy, ohatra: maro amin'ireo olona lazaina ho Bangladeshita no miteny amin'ny firoky Kolkata (avy any Bengal Andrefana, India). Tsy azo ekena ireo olona mpiantsehatra nomena anaraka Bengali tsotsotra tahaka ny Ovi sy Saju ary ny farany fa tsy ny kely indrindra, lavitra dia lavitra ny fahamarinana ny fomba nanoritsoritana ny herim-piarovana Bangladeshita tao amin'ny sarimihetsika.
Raha tsorina ny resaka, tsy zava-baovao tsy akory ny fanoritsoritana tafahoatra sy nitarina be loatra. Amin'ny sarimihetsika iray, raha tsotra ny fizotran'ny tantara, dia mety ho tanàna (voatsonga) kisendrasendra amin'ireo firenena maro ao Azia, Amerika Atsimo ary Afrika i Dhaka. Saingy tiako ny hijery zava-tsara tamin'ny antony nifidianana an'i Dhaka.
Ny 20 minitra voalohany tamin'ny Extraction no azoko nojerena. Maharikoriko ilay firoky Bangla… nankaleo izay nojereko…
Na izany aza, tsy hoe ratsy daholo ny jery tamberina rehetra. Noantsafain'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny imailaka ihany koa ny copywriter sady mpitsikera sarimihetsika Reza A. Rabbi , izay nahita ny filma ho sarimihetsika action mahamirana:
Amin'ny lalao an'efijery, donadona (actions) ary ireo toerana no sehatra anehoan'ny mpanatontosa [tale] ny majikany ka heveriko fa tena vitany tsara izany, indrindra fa tamin'ireo ampahany nisian'ny donadona (actions).
Tsy mbola nahita donadona maina be sy mampihovitrovitra toy izany aho any amin'ny sarimihetsika Hollywood hafa any tao ho ao. Novain'i Hargrave ny faritra ôrizinaly – tanandehibe iray any Amerika Latina nitrangan'ny zavatra mampihoron-koditra araka ny hita ao amin'ny boky ka nosoloiny an'i Dhaka, renivohitr'i Bangladesh. Raha Bangladeshita ianao dia ho tsikaritrao ao anatin'ny iray minitra ny elanelana. Manomboka amin'ny lantom-peo ka hatramin'ny antsipirihany hita amin'ny polisy ary ireo zavatra rehetra mahavàka anao.
Fa raha mijery sarimihetsika Hollywood hafa apetraka any amin'ny toerana iraisampirenena iray ianao, dia ho hitanao fa tsy zava-baovao ny tsy fisian'ny antsipirihany araka ny tokony ho izy sy ny [tsy] fitoviana nefa dia mbola nitia ireny sarimihetsika ireny ihany ianao rehefa tsy natao tao an-tokotaninay ilay izy. Ankoatra ireo sary nalaina tamin'ny tantelimby (drone), dia nalaina tany India sy Thailandy avokoa ny ampahany manontolo lazaina ho Dhaka ao amin'ny sarimihetsika.
Ary eto aho manome isa feno ho an'ny ekipa. Na dia manana ny olany aza ilay izy, dia manaitra ny maso ny antsipirihany amin'ny famariparitana an'i Dhaka. Na dia ao anatin'ny pikantsary dimy segondra aza, dia misy ny zavatra tsy mihetsika sy mihetsika mitranga amin'ny tokotanin-tsehatra mampahatsiahy anao fa i Dhaka io jerenao io.
Ka rehefa mandeha ny tantara, dia filma donadona iray hafa mahafinaritra avy any Hollywood ny “Extraction”, ahitana ireo zavatra mahazatra amin'ny tantara – mpikarama an'ady, fakana an-keriny, fanapoirana sns. Fa amin'izany rehetra izany dia nahafinaritra ilay izy ary dia nahita toerana mbola tsy hitanao taloha ianao.
Angamba nitondra zavatra mampiavaka manokana ihany koa ny nanatsofohana ity rap Bangla ity:
Mijery ny lafitsarany sasantsasany tao amin'ny Facebook  ihany koa ilay Bangladeshita Javed Iqbal nitady ravinahitra any ivelany:
Rehefa dokambarotra dia dokambarotra tsara. [..] Tian-dry zareo ny hampisehoany toerana vaovao ho an'ny mpijery. Kinasan'i Netflix ny hahazo mpamandrika vaovao miisa 100 tapitrisa ao India ao anatin'ny dimy taona hoavy. Ka dia nampiasa vola betsaka ry zareo amin'ny votoaty mifandraika amin'India. Ohatra iray amin'izany ity sarimihetsika ity. Mila mankaty Bangladesh ihany koa ry zareo.
Amin'ny fahitana ny fahombiazan'ny Extraction, nanambara  i Joe Russo fa efa andalana sahady ny tohiny. Na izany aza, ampahatsiahivin'i  Rafeul Hasan ny ao Hollywood handray matotra ny fiavahana manokana [an'ilay toerana] rehefa hanao zavatra amin'ny manaraka:
Amin'ny manaraka i Hollywood hifantoka sarimihetsika manodidina an'i Dhaka, efa azony tsara kokoa ny zava-drehetra amin'izao hatramin'ny antsipirihany indrindra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/05/29/148313/
 nahazo mpijery 90 tapitrisa: https://www.businessinsider.my/extraction-pacing-to-be-netflix-biggest-movie-premiere-ever-2020-5
 tsikera sy adihevitra: https://theenvoyweb.com/news/people-fume-dhaka-netflix-extraction/
 Chris Hemsworth: https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Hemsworth
 Ahmedabad sy Mumbai: https://www.bangkokpost.com/life/arts-and-entertainment/1907640/when-hollywood-comes-to-town
 Ban Pong, Thailandy: https://www.youtube.com/watch?v=SUnP6H1jQdA
 kaontiny Instagram: https://www.instagram.com/p/BuH-XDjgQNz/
 toerana mangirifiry sy tsy fahita firy: https://www.dhakatribune.com/showtime/2020/04/24/honest-review-of-extraction-russo-brothers-do-everything-right-except-the-bangla
 nilaza ny heviny momba ilay sarimihetsika: https://www.facebook.com/ARCHITECT.EMON/posts/10158395713367299